Maamulka G/Bari oo ka hadlay Degmooyin oo loo sameynayo Gole Deegaanka – SBC
Maamulka G/Bari oo ka hadlay Degmooyin oo loo sameynayo Gole Deegaanka
Gudoomiyaha Gobolka Bari C/samad Maxamed Galan oo manta shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Gobolka bari ee Boosaaso ayaa ka warbixiyay degmooyin ka tirsan gobolka oo loo sameynayo Golayaasha deegaanka kuwaasi oo ay ka mid yihiin Degmada Qandala iyo Degmada Iskushuban ee Gobolka Bari.
DHAGEYSO SHIRKA GUDOOMIYAHA GOBOLKA
Gudoomiyaha ayaa xusay Maamul ahaa maalmahan ay ku howlan yihiin sidii howlahaas loo socodisiin lahaa islamarkaasina degmooyinkan oo ah degmooyin magac dheer loogu sameyn lahaa Maamul ay dadku leeyihiin si ay iskugu tashadaan waxna u qabsadaan.
Gudoomiyaha Gobolka Bari ayaa meesha ka saaray inaysan jirin wa khilaaf ah oo ka tagan mamul u sameynta Degmooyinkan aan kor ku soo xusnay ee ka tirsan Gobolka Bari waxaana uu sheegay in dhawaan masuuliyiin uu ku jiro isaga iyo masuuliyiin ka tirsan Dowlada dhexe ay u aadi doonan degmooyinkaas sidii maamulada loogu soo dhisi lahaa.
C/samad Maxamed Galan ayaa docda kale xusay in ay dhawaan Rajeynayaan in laga soo dhiso golayaal cusub oo ay yeeshaan degmooyin kale oo ka tirsan Gobolka Bari sida Ufeyn,Baargaal,Caluulula Carmo iyo qaar kale oo ka mid ah Degmooyinka Gobolka Bari Hoos yimaada.
Gole u sameynta degmooyinkan waxay ku soo beegmeysaa xilli wasaarada arimaha gudaha ee Puntland ay waday latashiyada belaha degmooyinka kuwaasi oo ku aadan sidii ay u soo xulan laayeen Dadka deegaanadaas Xildhibaanada Matalaya golayaasha Degmooyinka Puntland.
Gudoomiyaha Gobolka Bari waxaan kula talin lahaa
Golayaasha deegaanka waa in eey soo dortaan shacabka deeganka. hadii kale sheeko baraleeyda Nagala taga iyo qaska aad wadaan.